ဂုဏ်ဒြပ် အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာအာဏာ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို လဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီ သားရေ ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး – Shwe Likes
ဂုဏ်ဒြပ် အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာအာဏာ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို လဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီ သားရေ ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီ နဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ ပရိသ တ်တွေရဲ့အားေ ပးချစ်ခ င်မှုကို အပြည့်အဝရရှိ ထားတဲ့ အနုပညာ ရှင် စုံတွဲေ လးတစ်တွဲ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သာ ယာတဲ့မိသား စုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်ေ တွအားကျနေရ တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် အနုပညာစုံတွဲလေး ဆိုရင်လည်း မမှား ပါဘူး။
မိသားစုဝင်ေ တွအေ ပါ်မှာအမြဲတမ်း အလေး ထားတဲ့ ဇဏ်ခီကတော့ ဒီနေ့ မှာကျရောက်တဲ့ သားလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွ က်ကိုလည်း မွေးနေ့ဆုမွ န်ကောင်းတွေအ ခုလိုပဲတော င်းပေးထားခဲ့ပါ တယ်။
”Happy 9th Birthday Noah! “ ဘဝရဲ့လှည့် ကွက်တွေထဲ တချိန်ချိန်တော့ေ ပးလျှောက် ရမှာပဲ။ ကိုယ်တွေ့မရှိရင်လော ကဓံကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ခက်မယ်။ အမည်းစက် မစွန်းတဲ့လူမရှိ ဘူးသားရယ် အခြေအနေတွေ ဟာပြောင်းလဲနေပေမယ့် ကိုယ်ကျင့် တရားနဲ့ဘာကိုမှမလဲလို က်ပါနဲ့..”
ဂုဏ် ဒြပ် အရာဝတ္တု စည်းစိမ်ဥစ္စာ အာဏာအ တွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တ ရားကိုလဲလိုက်ပြီဆိုရင် မင်းလူဖြစ်ရှူံးပြီသားရေ “ဆိုပြီး သူရဲ့ သီချင်းလေးတ စ်ပုဒ်ထဲက စားသားေ လးတွေနဲ့အတူ သားဖြစ်သူကို ဆုံးမ စကားလေးပြောကာ မွေးနေ့ဆုမွန်ကော င်းတော င်းပေးထားခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း Noah လေး အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ေ ကာင်းေ တွတောင်းပေးခြဲ့ ကပါဦးနော်။ ဇဏ်ခီရဲ့ သားဖြစ်သူကို မွေးနေ့ဆုတော င်းပေးထား တဲ့ထဲက သီချင်းေ လးကတော့ သူတို့ဇနီးေ မာင်နှံရဲ့ သွားနှင့်လေပြီးတဲ့ ပထမသားလေး Tristin Htut Khaung Kyi အတွက်ေ ရးပေးခဲ့တဲ့ “ရှိနေမယ်” ဆိုတဲ့သီချ င်းလေး ထဲက တစ်ပိုဒ်ပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေနား ဆင်လို့ရေ အာင် သီချင်းလေးကိုပါ မျှဝေဖော်ြ ပလိုက်ပါတ ယ်နော်။ Source – Zenn Kyi
သ႐ုပ္ေဆာင္ ဇဏ္ခီ နဲ႔ ခရစၥတီးနားခီ တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ကေတာ့ ပရိသ တ္ေတြရဲ့အားေ ပးခ်စ္ခ င္မႈကို အျပည့္အဝရရွိ ထားတဲ့ အႏုပညာ ရွင္ စုံတြဲေ လးတစ္တြဲ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္သာ ယာတဲ့မိသား စုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ပရိသတ္ေ တြအားက်ေနရ တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ အႏုပညာစုံတြဲေလး ဆိုရင္လည္း မမွား ပါဘူး။
မိသားစုဝင္ေ တြေအ ပၚမွာအျမဲတမ္း အေလး ထားတဲ့ ဇဏ္ခီကေတာ့ ဒီေန႔ မွာက်ေရာက္တဲ့ သားေလးရဲ့ ေမြးေန႔အတြ က္ကိုလည္း ေမြးေန႔ဆုမြ န္ေကာင္းေတြအ ခုလိုပဲေတာ င္းေပးထားခဲ့ပါ တယ္။
”Happy 9th Birthday Noah! “ ဘဝရဲ့လွည့္ ကြက္ေတြထဲ တခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ေ ပးေလၽွာက္ ရမွာပဲ။ ကိုယ္ေတြ႕မရွိရင္ေလာ ကဓံကို ရင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔ခက္မယ္။ အမည္းစက္ မစြန္းတဲ့လူမရွိ ဘူးသားရယ္ အေျခအေနေတြ ဟာေျပာင္းလဲေနေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္ တရားနဲ႔ဘာကိုမွမလဲလို က္ပါနဲ႔..”
ဂုဏ္ ျဒပ္ အရာဝတၱဳ စည္းစိမ္ဥစၥာ အာဏာအ တြက္ ကိုယ့္ရဲ့ကိုယ္က်င့္တ ရားကိုလဲလိုက္ၿပီဆိုရင္ မင္းလူျဖစ္ရႉံးၿပီသားေရ “ဆိုၿပီး သူရဲ့ သီခ်င္းေလးတ စ္ပုဒ္ထဲက စားသားေ လးေတြနဲ႔အတူ သားျဖစ္သူကို ဆုံးမ စကားေလးေျပာကာ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာ င္းေတာ င္းေပးထားခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း Noah ေလး အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေ ကာင္းေ တြေတာင္းေပးျခဲ့ ကပါဦးေနာ္။ ဇဏ္ခီရဲ့ သားျဖစ္သူကို ေမြးေန႔ဆုေတာ င္းေပးထား တဲ့ထဲက သီခ်င္းေ လးကေတာ့ သူတို႔ဇနီးေ မာင္ႏွံရဲ့ သြားႏွင့္ေလၿပီးတဲ့ ပထမသားေလး Tristin Htut Khaung Kyi အတြက္ေ ရးေပးခဲ့တဲ့ “ရွိေနမယ္” ဆိုတဲ့သီခ် င္းေလး ထဲက တစ္ပိုဒ္ပါတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေတြနား ဆင္လို႔ေရ အာင္ သီခ်င္းေလးကိုပါ မၽွေဝေဖာ္ျ ပလိုက္ပါတ ယ္ေနာ္။ Source – Zenn Kyi
မင်္ဂလာဆောင် မှာ ပန်;ကျဲခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်